I-Holy Country Cottage
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguMichaela
Indlu ethandekayo yelizwe ibekwe kumda weNgingqi yeVysočina kufutshane nengingqi yaseSouth Bohemia. Unokuchitha ixesha lakho ngokomzekelo ngokukhwela intaba, ukukhwela ibhayisekile okanye ngokuba kunye nabahlobo bakho kwaye ukonwabele ilizwe elinoxolo laseCzechia. Samkela iintsapho ezinabantwana naye nabani na. Kufuphi unokufumana iinqaba ezintle, iimyuziyam, amaziko embali yeedolophu kunye nokunye okunjalo (ezininzi kwi-20 km radius).
Kwi cottage sine 4 bedrooms. Amagumbi okulala amabini aneebhedi ezimbini abekwe kumgangatho ophantsi, omnye wabo unebhedi eyongezelelweyo (ibhedi enye) kunye nebhedi. Amanye amagumbi amabini akumgangatho wesibini, enye ineebhedi ezimbini zomntu omnye- eli gumbi lidityaniswe negumbi lokulala elilandelayo, elinebhedi ephindwe kabini.
Kukwakho nekhitshi eliphangaleleyo, elixhotyiswe ngokupheleleyo ngegumbi lokuhlala elidibanayo.
I-cottage yonke inendlu yangasese enye (eyahlukileyo) kunye negumbi lokuhlambela elincinci elineshawa kunye nomatshini wokuhlamba. Kumgangatho ophezulu kukho isinki kwigumbi elinye.
Izithuba zangaphandle zabelwana ngazo kunye nabanikazi (thina) - kukho ithuba lokuhlala phantsi kwe-pergola, i-barbecue, imisebenzi yabantwana abancinci (i-trampoline, i-sandpit, i-swings, amathoyizi).
Isakhiwo siya kuba sesakho sonke, akukho ezinye iindwendwe.
1 ibhedi elala abantu ababini, \_u00A0Ibhedi yomntwana eyi-1, \_u00A0Ibhedi yosana eyi-1
Sihlala singaphaya kweyadi, sifumaneka ngalo lonke ixesha.